DAAWO: Duqa Muqdisho Eng, Yariisow waa sidee xaaladiisa Caafimaad?
25-kii Bishan Diyaarad khaas ah oo ay leedahay Qadar ayaa maagaalada Muqdisho ka qaaday dhaawacyada 12 Qof oo uu ku jiro Guddoomiyaha Gobalka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Eng Abdirahman Omar Yarisow oo Dhaawac kasoo gaaray Weerar naftii halignimo ah oo 24-kii Bishaan ka dhacay Howlka Shirarka Dowladda Hoose Ee Xamar.
Wasiirka Dhallinyarada iyo Cayaaraha Xukuumadda Soomaaliya oo kamid ah Guddiga Heer Qaran ee loo xilsaaray lasocoshada Xaaladda Dhaawacyada islamarkaana ku sugan Cisbitaalka lagu daweynayo Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ayaa Caawa iyadoo la hadleysay Radio Muqdisho waxay ay sheegtay in ay aad uga soo reyneyso xaaladda caafimaadka Duqa Magaalada Muqdisho.
“Xaaladda Caafimaadka Guddoomiyaha Gobalka Banaadir iyo Bukaanadii kale ee lasoo qaaday wey kasoo reyneysaa maalinba maalinta ka dambeysa, Qaarkood waa laga soo badalay Sariirihii lagu daweynayay, insha Alllaah waxaan maalmaha soosocdo rajeyneynaa in xaaladdiisu ay sidii caadiga aheyd ku soo laabat” ayay tiri Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye.
Danjiraha Dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Qadar Cabdirasaaq Faarax Cali oo faahfaahin dheeraad ah sii bixiyay ayaa sheegay in Qeybta Xaaladda Dagdagga ah laga saaray 6 kamid ah bukaanadii la qaaday, haddana Guddoomiyaha Gobalka Banaadir iyo Maxamed Cabdi Maxamuud Gaboose ay ku harsanyihiin Qeybta Xaalaadda Dagdagga ah.